» “ठुलै हिम्मत बोकेर, आउनुपर्छ भन्दै नायीका, प्रियंका कार्की कसको, पक्ष्यमा बोलिन ? “ठुलै हिम्मत बोकेर, आउनुपर्छ भन्दै नायीका, प्रियंका कार्की कसको, पक्ष्यमा बोलिन ? – हाम्रो खबर
“ठुलै हिम्मत बोकेर, आउनुपर्छ भन्दै नायीका, प्रियंका कार्की कसको, पक्ष्यमा बोलिन ?
काठमाडौं “यतिबेला नेपाली कला क्षेत्र अभिनेता पल शाह प्रकरणले तरंगित छ । एक नाबालिग गायिकाले अभिनेता शाहविरुद्ध ज’ब’र्ज’स्ती क’र’णीको आरोपमा उजुरी दिएपछि पल केही दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । प्रहरीले पललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी राख्दा यस विषयमा नेपाली सेलेब्रिटीहरु खुल्न थालेका छन् ।
“सुरुको समय यस बिषयमा अधिकांश कलाकर्मी मौन थिए । तर पछिल्लो दिनमा भने सेलेब्रिटीहरु एकपछि अर्को गर्दै खुल्न थालेका हुन् । उनीहरुले यस बिषयमा गम्भीर हुन नारीको सम्मान गर्न र बालबालिकाहरुका अधिकारको रक्षा गर्नसमेत आह्वान छन् ।
“नाबालिका गायिकालाई क’र’णी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कलाकार पल शाह अहिले दमौलीस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको न्यायिक हिरासतमा छन्। फरार भएको चार दिनपछि आफैं प्रहरी सम्पर्कमा पुगेका शाहलाई आइतबार दिउँसो तीन बजेदेखि अदालतबाट सात दिनको म्याद थपेर हिरासतमा राखिएको छ।
“प्रहरी हिरासतमा बसेर न्याय पाउने अपेक्षामा छन् अभिनेता पल शाह । पलविरुद्ध एक नाबालिक गायिकाले दिएको उजुरीसँगै अहिले प्रहरीले सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ । तनहुँ जिल्ला अदालतले ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएपछि अहिले प्रहरीले सो प्रकरणमा अनुसन्धान जारी राखेका बेला त्यसलाई प्रभावित पार्ने खालका गतिविधि भइरहेका छन् ।
“यसैबिच नाईक प्रियंका कार्की पनि पल शाह प्रकरण बारे बोल्दै आफ्नो फेसबुक स्टाटस मार्फत आफु पीडित महिला दिदी-बहिनीहरुको म भित्री आत्मा देखि नै कदर गर्दछु भन्दै पडित गायिका को पक्ष्यमा बोलेकी छिन । उनले लेखेको स्टाटस जस्ताको तेस्तै :-
“दुखको कुरा, हामी यस्तो समाजमा बाँचेका छौँ, जहाँ पीडितले “म पीडित हुँ” भन्न मात्र पनि ठुलै हिम्मत बोकेर आउनुपर्छ। यस्तोमा, अगाडि बढेर आवाज उठाउने हरेक पीडित महिला दिदी-बहिनीहरुको म भित्री आत्मा देखि नै कदर गर्दछु।
“नाबालिगको हकमा, मैले बुझे अनुसार, उमेरको हदबन्दी (१८ वर्ष) नेपालमा मात्र हैन, विश्वका सबै देशमा, आफ्नो परिवेश अनुसार, उमेर नपुगेकाहरुको ‘निर्णय लिन सक्ने क्षमता’लाई ध्यानमा राखेर नै बनाइएको हुन्छ। नाबालिगहरु निर्णय लिन सक्ने क्षमता राख्दैनन् र तिनको संरक्षण सभ्य समाजको उत्तरदायित्व पनि हो भन्ने मेरो पनि मान्यता हो। यस्तो अवस्थामा, नाबालिगले ‘म पीडित हुँ’ भन्दा, उनको चरित्र माथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउनु एउटा जिम्मेदार समाजको काम हुनै सक्दैन।
“बाँकी काम कानुनको, वहाँहरुलाई निश्पक्ष काम गर्न दिनु हाम्रो कर्तव्य हो।””